ईमेलमा CCI राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्
द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | फरवरी 10, 2021 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
राम्रो व्यावसायिक लेखन को लागी तर्क कनेक्टर्स
तपाईले एक दिन दर्जनौं इमेलहरू लेख्नुहुन्छ। अहिले सम्म, तपाइँको लागि, लेखन मुख्य रूपमा हिज्जे, व्याकरण, संयुग्मन रहेको छ। हामीले हरेक दिन सिक्ने हो भने पनि। यो त्यो ठाउँ होइन जहाँ तपाईं अहिले आफ्नो प्रयासमा केन्द्रित हुन चाहनुहुन्छ। जब तपाइँ ए ई-मेल, एक रिपोर्ट वा अधिक सामान्यतया कुनै पनि प्रकारको लेखन। तपाईलाई केहि गलत छ भन्ने धारणा छ। यो सानो कुरा हराइरहेको छ जुन हामीले आधिकारिक कागजातहरू, पत्रपत्रिकाहरू, पुस्तकहरूमा पाउँछौं। शब्दावली, शब्दहरूको क्रम, अभिव्यक्तिको प्रयोग जुन लेखन कलामा निपुण हुनेहरूको पहिचान हो। परिचित तार्किक कनेक्टरहरू भन्दा बढी दिगो प्रयोग गरेर आफ्नो लेखन सुधार गर्न सुरु गर्नुहोस्।
के लागि तार्किक कनेक्टर्स?
किन यद्यपि, तथापि, यसको विपरित, …… को तरिकामा। तार्किक जडानकर्ता शब्दहरू हुन् जुन कुनै पाठको संरचना गर्न प्रयोग गरिनुपर्दछ। मुख्यतया तपाइँको पाठको विभिन्न तत्वहरू, एक वाक्यको बीचमा तार्किक जडानमा जोड दिन। के कारणले यस्तो र यस्तो परिणाम निम्त्याउँदछ। कुन घटनाले त्यस्तो उद्देश्य प्राप्त गर्न सम्भव बनाउँदछ। यी शब्दहरूको प्रयोगले तपाईंको वाक्यलाई सामञ्जस्यपूर्ण तरिकामा लिंक गर्न अनुमति दिन्छ। जसले तपाईंलाई पढ्छ उसले तपाईंको शब्द अस्पष्टता बिना बुझ्दछ।
प्रयोग गर्नको लागि भाषाको स्तर
तैपनि, तपाईंको पाठको तर्क र हिज्जे त्रुटिहीन छन्। सम्भव छ समान शब्दहरूको व्यवस्थित पुनरावृत्ति। जे होस्, यसले असभ्य दृश्य दिन्छ। त्यसकारण तपाईंले पुन: पढ्नुपर्दछ तपाईंको पाठ उदाहरणको लागि प्रतिस्थापन गरिएको हो तर: तथापि, अर्कोतर्फ, इत्यादि। मकैको प्रयोग पक्कै पनि गल्ती होईन। सबै कुराको बावजुद, अधिक समर्थित रेजिस्टरमा सम्बन्धित कनेक्टरहरूको प्रयोग। तपाईंको पाठमा तुरुन्तै थप परिष्कृत, अधिक पेशेवर स्पर्श थप्नुहोस्। तपाइँको शब्दावली को विविधता रेखीय शब्दहरु को साथ हल्का पुनरावृत्ति बिना बगुन। हामी निश्चित रूपमा तपाईको जानकारी को प्रसारण गर्न को लागी राम्रो प्रसारण को प्रचार गर्छौं।
तपाइँको पाठहरूको राम्रो स्थिरताका लागि तार्किक जडानहरूको सूची
यहाँ तपाइँको ईमेलहरू, रिपोर्टहरू र अन्य लेखनमा प्रयोग गर्न को लागी एक सूची छ। ध्यान दिएर तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्दा तपाईं पढ्न र तपाईंको पाठको राम्रो समझ को लागी सुविधा पुर्‍याउनु हुनेछ। यो स्पष्ट छ कि एक महान विचार, जसलाई कसैले पनि बुझ्दैन, चाँडै तपाइँका वरिष्ठहरूले बिर्सनेछन्।
त्यो भन्न सजिलो छ
यो नै कारण हो।
त्यो भन्नु पर्ने हो
यसमा समावेश छ
त्यस बेला देखि
यो परिकल्पना अनुसरण गरेर
रिड स्पष्ट र व्यावसायिक इमेल कसरी लेख्न?
अझ विशेष गरी
थप स्पष्ट रूपमा
यदि छैन भने
तपाईंको लेखन शैली सुधार गर्नुहोस्: तार्किक कनेक्टर्स जुलाई 25th, 2021Tranquillus
अघिल्लोओभरटाइमको प्रमाण: कर्मचारीले कुनै विश्रामहरू संकेत गर्नु पर्दैन
निम्नएक समुदाय व्यवस्थापक बन्नुहोस् र तपाइँको परियोजनाहरु लाई नयाँ प्रोत्साहन दिनुहोस्
एक पत्र देखि एक पेशेवर इमेल फरक
ब्यापार स्टार्ट-अप को लागी छोड्नुहोस्, नि: शुल्क आवेदन पत्र टेम्प्लेट
काममा तपाईंको लेखन स्तर कसरी सुधार गर्ने?
लिखित र मौखिक संचार - नि: शुल्क प्रशिक्षण (14) दायाँ (161) व्यक्तिगत र व्यावसायिक विकास नि: शुल्क प्रशिक्षण (49) उद्यमिता निःशुल्क प्रशिक्षण (81) एक्सेल नि: शुल्क प्रशिक्षण (28) व्यावसायिक प्रशिक्षण (104) परियोजना व्यवस्थापन नि: शुल्क प्रशिक्षण (15) विदेशी भाषा नि: शुल्क प्रशिक्षण (9) विदेशी भाषा विधिहरू र सल्लाह (22) सफ्टवेयर र अनुप्रयोग नि: शुल्क प्रशिक्षण (20) पत्र मोडेल (19) mooc (154) गुगल उपकरण नि: शुल्क प्रशिक्षण (14) PowerPoint नि: शुल्क प्रशिक्षण (13) नि: शुल्क वेबमार्केटिंग प्रशिक्षण (72) शब्द नि: शुल्क प्रशिक्षण (13)